Firipi Kushmaro's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Firipi Kushmaro
Philip Kushmaro, VP Kushanda pa Ranky, akaberekerwa muCanada kuna Commodore 64 Guru sekuru uye baba vanovenga zvese zvemadhijitari, izvo zvakamushandura kuva mumwe munhu asingangodi zvese zvemadhijitari asi anoda kuzvitsanangura. Iye software yeinjiniya, Microsoft-yakasimbiswa IT nyanzvi, webmaster uye zvimwe zvakawanda. Iye rimwe zuva akafunga kuzvisiya zvese kuti awedzere divi rake rekugadzira. Kunyora nezve izvo zvinhu zvaanovenga kuita kwave kungopfuura kuita hobby. Kana asiri kubloga kana kuita izvo zvaanoita zvebasa, unogona kumuwana iye kune yekurovedza muviri kuMMA uye kuBrazil Jiu Jitsu.